के हो स्वप्नदोष ? यस्ता छन् छुटकारा दिलाउने ५ तरिका – Etajakhabar
के हो स्वप्नदोष ? यस्ता छन् छुटकारा दिलाउने ५ तरिका
ताजा खबर:- वेट ड्रीम्स अर्थात् स्वप्नदोष एक अनैच्छिक आर्गेज्म हुने गर्छ, जो कसैलाई पनि हुनसक्छ, जब उ निन्द्रामा हुन्छ । यो पुरुषहरूमा हुने एक सामान्य यौनिक घटना हो, जो कपडाको कारणले वा सुत्ने तरिकाको कारण हुनसक्ने यौन उत्तेजनाको परिणाम हुन्छ । हप्तामा एकपटक हुने स्वप्नदोष सामान्य हुन्छ । अधिकांश मानिसले यसलाई असमान्य घटनाको रूपमा हेर्ने गर्छन् र यसलाई सेक्शुअल डिसअर्डर ठानी चिन्तित हुने गर्दछन् । जबकि वेट ड्रीम्सको कारणले चिन्तित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । यो शरीरको कार्यप्रणालीलाई सुचारू रूपले संचालनको सूचक पनि हुन्छ । तर पनि यदि तपाई यसबाट छुटकारा चाहनुहुन्छ भने यसको उपाय पनि छ । पुरुषमा हुने यस सामान्य समस्याबाट बँच्नको लागे तपाई यी उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
तनावबाट छुटकारा- स्वप्नदोष हुने सम्भावना त्यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी हुन्छ जब तपाई अत्यधिक तनावमा रहनुहुन्छ । यसकारण सधैँ आफूलाई तनावमुक्त राख्ने कोशिश गर्नुहोस् । साथ-साथै प्रयाप्त निन्द्रा लिनुहोस् र आफ्नो खानपानमा पोषक तत्व समावेश गर्नुहोस् । अस्वस्थकर खाना, प्रयाप्त निन्द्रा र नियमित व्यायामले तपाई स्वप्नदोषको समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
सुत्ने तरिका- स्वप्नदोषबाट बँच्नका लागि तपाईले आफ्नो सुत्ने तरिकामा केही परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यदि तपाई निन्द्रामा उत्तेजित र स्खलित हुन चाहनु हुन्न भने दायाँतर्फ भएर सुत्नुपर्दछ । साथै अधिक कसिलो अन्डरगार्मेट लगाउनबाट पनि बँच्नुपर्दछ ।
बढी पोर्न भिडियो हेर्नुहुँदैन- विशेषगरी जब तपाई सुत्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अधिक मात्रामा पोर्न भिडियो हेर्नुको कारणले अश्लील विचारले तपाईको मस्तिष्क भरिन्छ । यस कारणले स्वप्नदोषको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
चिसो शावरको प्रयोग- यौनिक संवेदनशीलताको सबैभन्दा ठूलो कारण तातो पानीले नुहाउनु हो । यसकारण सधैँ चिसो पानीले नुहाउने कोशिश गर्नुहोस् । यसले जेनिटल सेन्सेटिभिटीलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । जसले स्वप्नदोषको समस्या कम गर्छ ।
मसालेदार खाना कम खानुहोस्- मसालेदार खाना गरम प्रकृतीको हुन्छ । यस कारण यसले स्वपनदोषलाई बढाउँछ । राती कफी पिउँदा पनि स्वप्नदोषको समस्यलाई बढाउँछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०७४ समय: २२:२१:२७